Vaovao - Ahoana ny fomba fampiasana ilay milina fanodinana horonam-boky?
1. Hamarino tsara fa mampifandray herinaratra dingana telo ianao. Tsindrio ny bokotra "Blanket Enter", ny lamba firakotra hanakaiky kokoa ny amponga ary handrehitra ny fanairana "Blanket Action Indication" ary hanaitra azy ireo miaraka amin'izay. Rehefa nifikitra tanteraka tamin'ny amponga ny "bodofotsy Action Indication" dia niato ny fanairana. Tsindrio ny bokotra "manomboka", handeha ny milina.
2. Amboary ny "FREQ SET" (Hafainganana) boribory 18. Tsy mety ambany noho ny 10. Raha tsy izany dia ho vaky mora foana ny motera. (REV no fiverenana, mandroso ny FWD, tapaka ny STOP / RESET. Ny fikirakirana ny EX-factory machine dia "FWD". Tsy mila manova azy io. FREQ SET dia fametrahana matetika)
3. Amin'ny fotoana voalohany dia mila manafana milina toy ny etsy ambany ianao:
1) Ataovy 50 degre Celsius ny mari-pana, rehefa nafana hatramin'ny 50 degre dia miandry 20 minitra.
2) Mametraha 80 ℃, aorian'ny fanafanana hatramin'ny 80 degre, miandry 30 minitra.
3) Mametraha 90 ℃, aorian'ny fanafanana hatramin'ny 95 degre, miandry 30 minitra.
4) Mametraha 100 ℃, aorian'ny fanamafisana hatramin'ny 100 degre, miandry 30 minitra.
5) Mametraha 110 ℃, aorian'ny hafanana hatramin'ny 110 degre, miandry 15 minitra.
6) Mametraha 120 ℃, aorian'ny hafanana hatramin'ny 120 degre, miandry 15 minitra.
7) Mametraha 250 ℃, hafanana mivantana hatramin'ny 250 ℃
Avelao ny milina hiasa amin'ny 250 ℃ nefa tsy hanao famindrana hafanana mandritra ny 4 ora.
4. Fanindroany dia afaka mametraka mari-pana ianao amin'izay ilainao mivantana. Raha mila 220 ℃ ianao dia apetraho amin'ny 220 ℃ sy manodidina ny 15.00 izany.
Aorian'ny hafanan'ny hafanana hatramin'ny 220 degre, kitiho ny bokotra "Pressure Switch", 2 ny paoma vita amin'ny fingotra 2 hanery lamba firakotra mba hifikitra amin'ny amponga. (Torohevitra: mila mifandray amin'ny compresseur rivotra ny masinina)
5. Raha manify loatra ny lamba dia mihazakazaha miaraka amin'ny taratasy fiarovana mba hisorohana ny ranomainty hiditra ao anaty lamba firakotra.
6. Ny sublimation mahomby dia mitaky fotoana, mari-pana ary tsindry mety. Ny hatevin'ny lamba, ny kalitaon'ny taratasy sublimation ary ny karazan-damba dia hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny sublimation. Andramo ny sombintsombiny kely amin'ny maripana sy hafainganana isan-karazany alohan'ny famokarana ara-barotra.
7. Amin'ny faran'ny andro fiasana:
1) Amboary ny hafainganam-pandehan'ny amponga ho haingana kokoa ho 40.00 fihodinana.
2) Tsindrio ny "Ajanony tampoka". Hitsahatra ny hafanana ny amponga ary tsy hihazakazaka ny amponga mandra-pahatongan'ny fotoanan'ny temp. dia 90 ℃.
3) Ny bokotra "Stop" dia azo tsindriana rehefa nitranga ny toe-javatra EMERGENCY. Ny lamba firakotra dia hisaraka avy hatrany amin'ny amponga. Ny halavan'ny lamba firakotra sy amponga dia 4cm lehibe indrindra. Raha manana maika ianao ary mila miala eo amin'ny orinasa indray mandeha, dia azonao atao ny manindry bokotra "mijanona".
NAOTY: alao antoka fa lamba firakotra no nisaraka tanteraka tamin'ny amponga.
Fitandremana amin'ny fandidiana
1. Ny hafainganam-pandehan'ny milina dia tsy afaka ambany noho ny 10, raha tsy izany dia ho mora vaky ny motera.
2. Rehefa tapaka tampoka ny herinaratra dia mila manasaraka lamba firakotra amin'ny amponga ianao mba tsy ho may. (tsy maintsy jerena ary alao antoka fa tafasaraka tanteraka izy io)
3. Rafitra fampifanarahana lamba firakotra mandeha ho azy, mila manao ny fampifanarahana tanana ianao rehefa tapaka ny rafitra mandeha ho azy.
4. Rehefa manomboka manafana ny milina dia tsy maintsy mihazakazaka ny amponga hisorohana ny firakofan'ny lamba firakotra. Aleo ny mpiasa no eo amin'ny fanamainana.
5. Amin'ny toetr'andro marobe, toy ny fijanonan'ny vonjy maika na ny fahatapahan'ny herinaratra, misaraka amin'ny lamba firakotra amin'ny amponga indray mandeha.
6. Ny bearings dia tokony hosorana "diloilo menaka" isan-kerinandro, izay miantoka ny fihodinan'ny fiterahana.
7. Ataovy madio hatrany ny masinina, indrindra ny mpankafy, peratra slip ary borosy karbonika sns.
8. Ara-dalàna raha misy jiro jiro famantarana ary peratra buzzer rehefa miditra ny lamba firakotra.